Vaovao androany 050507
2007-05-05 @ 11:38 in Politika
Mahavariana ny eto an-tanàna amin’izao fotoana izao ry zareo. Fantatra moa fa mihamangatsiaka ny toetr’andro fa misy somary mampihomehy ihany. Amin’ny maraina dia misy hafanana ihany. Amin’ny atoandro indray no lasa mitady akanjo mafana (mety ho ao indrindra ny rivotra mangatsiaka) nefa rehefa tolakandro dia miverina mafana indray ny andro ary voatery esorina indray ilay akanjo mafana nanaovana teo. Tena tsikaritra mihitsy io toe-javatra io hatramin’ny alarobia indrindra indrindra. Lasa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy mihitsy ilay toetr’andro sa ririnindasa tsy tsaroana sahady ?
Eto Antananarivo ihany, miasa mafy indray ny mpampitandro ny fifamoivoizana androany maraina (izay efa namaky ny andavanandron’iarivo moa mahalala ny antsoina hoe Soanagaly iray sy fahefany !)
dia lasa avy hatrany ny eritreritra hoe hivoaka aiza eto Antananarivo indray ary ny filoha Ravalomanana izany ? Hay tokoa moa anio no manomboka ilay herinandro ikarakaran’ny Advantista ilay fitoriana ny filazantsara lehibe eo amin’ny kianjaben’ny Mahamasina.
Io fitoriana io moa dia nampitondraina ny lohahevitra hoe Asandrato i Kristy (ka ny t dia natao sarina lakroa somary mifehy ny sarin’i Madagasikara izay, loza indray ity tsy manana fakantsary ity). Ny filohan’ny fiangonana Advantista amin’ny faritra atsimon’i Afrika sy ny Oseana Indiana sady filoha lefitry ny fiangonana Advantista manerantany Atoa Paul Ratsarasaotra, pastora izay hita avy hatrany fa Malagasy no hanao ny famelabelarana isankariva ao amin’io kianjabe io.
Nanasa olom-panjakana ambony ry zareo amin’ity fanokafana ity. Ireto avy izany nasaina izany : Ny filoham-pirenena Atoa Marc Ravalomanana, ny filohan’ny Antenimieran-doholona Atoa Rajemison Rakotomaharo, ny filohan’ny antenimieram-pirenena Atoa Mahafaritsy Samuel Razakanirina, ny praiminisitra Atoa Charles Rabemananjara ary ny minisitry ny fahasalamana Atoa Robinson Louis. Raha jerena ireo olona rehetra ireo dia tsy misy mivoaka avy ao amin’ilay fiangonana.
Tsy dia mahazatra loatra aloha ny hahitana izany ireo tompon’andraikitra ambony ireo hiaraka amina fiangonana tsy ao anatin’ny ffkm ka asa raha ho tonga daholo izy rehetra anio. Efa azo vinaniana avy hatrany kosa fa ho avy ny filoha hanatrika izany fotoam-panokafana izany. Tsy navela handehanan’ny fiara intsony manko ny lalana mankany amin’ny kianjaben’i Mahamasina androany maraina (mandra-pahavitan’ny lanonana ka efa lasa « nody » ny filoha mazava ho azy).
Izay efa zatra ny fiainana eto Antananarivo indrindra amin’ny fitaterana dia mahalala fa izay fiara fitaterana mankany Mahamasina avy aty andrefana dia tsy manana zo hijanona eo amin’ny fiantsonana eo Anosy intsony. Noho izany dia voatery teny anoloan’ny tany malalaka Antanimbarinandriana mifanatrika amin’ny ranon’Anosy ihany no fiantsonana vonjimaika. Ny fandehanan’ny mpandeha an-tongotra mazava loatra no lasa iakaran’ny fiarabe. Rehefa lalao goavana eo Mahamasina anefa dia afaka mijanona eo ampitan’ny Kaomisaria ihany ireo fiara fitarerana ireo.
Toliary indray : Zavatra adinoko ny nanoratra azy omaly dia ilay tsy fitenenana momba ilay arina antony faharoa nampikorontana ny mponina ihany koa.
Nalaza manko fa norarana tsy hahazo miditra tao an-tanàna ny arina. Isika rehetra dia mahafantatra fa eto Madagasikara dia mbola io aloha no fandrehitry ny Malagasy rehefa hahandro hanina. Izay nandre dia nihevitra avy hatrany fa nisy famelomana korontana mihitsy izany fandrarana ny arina tsy hiditra an-tanàna izany. Izay ihany no tena natao mahoraka eran’ny vazantany.
Kanjo olona avy amin’ny mpanohitra ihany no namoaka teny kely (mino aho fa tsy tandrina io teny io ary tsy tao anatin’ny paikam-pandaingana amin’ny alalan’ny tsy fitenenana ny zavatra rehetra) manao hoe nanery ny olona hividy ny arintany (arina avy any Sakoa !) ny mpitondra fanjakana tao an-toerana. Io karazan’arina io izany no hany navela hiditra ny tanàna mba hanajanonana ny fanaovana ny voamboana (io moa no palissandre ?) tsy hatao kitay intsony. Mahalala ny hasarobidin’ny voamboana angamba isika rehetra.
Tsy neken’ny be sy ny maro io arintany io fa lafo loatra. Arivo ariary ny kilao ka tsy takatry ny fari-pananana loatra. Izany hoe niniana nampanginina ny fisian’ity arina tsy misy mpividy ity fa ny saribao avy amin’ny hazo vidiana mora ihany no tadiavin’ny rehetra. Amin’izao fotoana izao moa dia efa nilefitra ny tompon’andraikitra ka navela hiditra avokoa ny arina rehetra.
Toliary ihany ary mbola nohadinoiko ihany koa. Tsy ireo mpandroba loatra no voalaza fa niteny hoe mandehana mody fa ny tao amin’ny Toby miaramila mihitsy no nanome hevitra ireo nialokaloka tao hoe
tsaratsara kokoa aminareo raha mody any Antananarivo mihitsy ianareo mandra-pilamin’ny raharaha. Izany hoe na ny tao aza dia mbola mihevitra ny hafa ho « mpiavy » ihany koa. Ny tena zava-doza amin’ity teny ity anefa dia mitady hirona amin’ilay fampiheverana efa nataon’ny mpanjanatany tamin’ny androny ihany fa tsy Malagasy ny ny merina sy ny betsileo ihany koa « mpiavy » fa avy any amin’ny firenenkafa mihitsy nanafika ireo Malagasy efa nonina teto. Izany hoe araka ireo mpiandraikitra ny toby ireo dia tahaka ny hoe ny fisian’ireo olona ireo mihitsy no olana any an-tanàna. (Dia mahasahia indray miteny fa mpanavakavaka izay mahasahy miteny tahaka izao sy hanameloka ilay fomba fiheverana misisika ambadika ihany).
Dia nisy moa ny nanameloka hoe nahoana ny nambenana mafy ny magro fa ny hafa indray tsy noraharahiana loatra. Dia nisy namaly izany fa ao amin’ny lalam-panorenana mihitsy (hatramin’ny lalam-panorenana teo aloha izany) no milaza mazava fa anjaran’ny fanjakana malagasy ny miaro ny filoha sy ny ankohonany ary ny fananany. Isika anefa mahafantatra fa fananan’ny filoha indrindra ny magro. Izany akory tsy milaza hoe tsy raharahiana ny fananan’ny hafa, tsia ananana adidy avokoa ny fananan’ny olona rehetra.
Mahajanga indray, nikasa hamory vahoaka omaly sy anio ny Komity mpanohana ny Tsia tamin’ny fitsapa-kevi-bahoaka tamin’ny iray volana lasa iny
hanao fampielezan-kevitra amin’ny tsy mahamety ity lalam-panorenana kasaina hampiharina eto amin’ny firenena ity. Tena tsy vazivazy ka kisangisangy ity lazaiko ity fa izany mihitsy no marina. Malahelo moa ry zareo fa tsy nomena alalana hamory vahoaka ry zareo. Ny tenin’ny tompon’andraikitry ny tanàna no nanao hoe hisorohana ny korontana no tsy namelana azy ireo hamory vahoaka any amin’ny toerana efa mahazatra ho famoriana vahoaka (izay efa tany Mahajanga izany dia tokony hahalala izany toerana izany : mbola tsy tany manko aho). Nihevitra moa ireo Komity Mpanohana ny Tsia ireo fa tsy maintsy hamory vahoaka ry zareo na ho inona na ho inona mitranga.
Any Antsiranana indray dia voatery nody taty amin’ny ray aman-dreniny taty Antananarivo ny mpianatra miisa 50 eo ho eo noho izy ireo tsy mety mandray anjara amin’ny fitokonan’ny mpianatra any.
Nifanaraka manko ireo mpitokona fa hodorana avokoa ny trano sy ny fananan’ireo mpianatra tsy nety nitokona. Izany hoe amiko dia sahala amin’ny hoe fananan’ireo mpianatra ireo ny trano ipetrahany fa tsy an’ny Oniversite velively. Azo lazaina hoe mitovitovy amin’ny efa nolazaiko momba ny tany Sambava ihany no anton’ity antery voatery nody taty amin’ny ray aman-dreniny aty Antananarivo ity.
Mazava loatra fa tsy maintsy ho nisy ny mpianatra tsy manana sara hodiana. Nifanaraka tamin’ny mpanao fitaterana izy ireo fa rehefa tonga aty dia miantso olona amin’ny alalan’ny finday hitondra ny vola saran’izy ireo. Mpianatra nody avy tany no nanatona ny mpanao gazety ary ny radio don bosco no loharanom-baovaoko amin’ity. Marihina fa tao anaty vaovao mihitsy no namoahana ity vaovao ity fa tsy antso antsofindavitra tsy akory.
Mbola any Antsiranana ihany dia malaza ny tsaho any an-toerana fa misy olona mpaka ankeriny indrindra fa vehivavy mandeha any an-tanàna any amin’ny alina.
Noho izany toe-javatra izany dia tsy misy loatra intsony ny mahasahy mivoaka amin’ny alina nefa fahazaran’ny olona any mihitsy ny mivoaka harivariva, hoy ny tatitra. NIfandraindraika tamin’ilay fakana viavy ankeriny tany amin’ny faritra Sava koa moa ity tsaho ity ka tena nandaitra tokoa. Mangina ny tanàna. Voambin’ny mpianatra tsara ihany koa ny Oniversite ka sarotra ny hidirana any.
Karazany fehiny ihany dia nampahatsiahy ny mpanara-baovao iray fa efa nampiomana anie ny antoko mpanohitra amin’ny hihetsehany tsy ho ela iray na roa volana lasa izay. Aminy dia efa nomanina ireo toe-javatra hita amin’izao fotoana ireo.